အောင်မြင်ဖို့အတွက် လိုအပ်နေတဲ့အရာများ – Trend.com.mm
အောင်မြင်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်နေတာလဲ။ ဒီမှာ အောင်မြင်စေဖို့ ထားရှိရမယ့် အရာတွေလာပါပြီ။ အောင်မြင်ဖို့တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူညီတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ခဏဖယ်ထားလိုက်ပါ။ အောင်မြင်ချင်တဲ့လူတိုင်းမှာ သိရှိရမယ့်အချက် (၁၀) ကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။
၁။ Drive (မိမိကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးခြင်း)
တခြားသူတွေထက်ပိုထူးချွန်ပြီးအောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုခိုင်းပါ။တွန်းအားပေးပါ။ အလုပ်တစ်ခုပြီးတိုင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူလိုက်ပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုချမှတ်ပြီးပြီဆိုရင် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွန်းအားပေးပြီးခိုင်းတတ်ပါစေ။
၂။ Self-reliance (မိမိကိုယ်ကိုအားကိုးခြင်း)
အလုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပြီးလုပ်ကြည့်ပါ။ ခက်ခဲတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဆိုရင်လည်းကိုယ်တိုင်ချကြည့်ပါ။ တစ်ခုပါပဲ။ ကိုယ့်အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်သိဖို့ပါပဲ။ ဆိုလိုတာကသေချာတတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင်ဖို့နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးသင့်တယ်ဆိုတာကို လက်ခံရပါမယ်။ ဒါမှအတွေ့အကြုံများပါမယ်။
အတွေ့အကြုံများမှအောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားရင်းတွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲတွေကို ကျော်လွှားနိုင်မယ်မဟုတ်ပါလား။
၃။ Will-power (စိတ်စွမ်းအား)
ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင်ကိုအရောက်သွားပါ။ ကမ္ဘာ့အတော်ဆုံးနဲ့အအောင်မြင်ဆုံး ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်တွေကိုရောက်ဖို့ တစိုက်မတ်မတ်နဲ့ အားသွန်ခွန်စိုက်ကြိုးစားကြပါတယ်။ ”There is will, there is way” ဆိုသလိုပါပဲ။ ”လိုလျှင်ကြံဆနည်းလမ်းရပါတယ်။” အဓိကကကိုယ့်မှာ အောင်မြင်ဖို့အတွက်စိတ်စွမ်းအားရှိနေဖို့ပါပဲ။
၄။ Patience (စိတ်ရှည်ခြင်း)
၅။ Integrity (ကိုယ်ကျင့်တရား)
ဒါကတော့ပြောစရာတောင်မလိုပါဘူး။ကိုယ်ကျင့်တရားဒါမှမဟုတ်စာရိတ္တမကောင်းတဲ့သူကိုလူ့အဖွဲ့အစည်းကပစ်ပယ်တတ်ကြပါတယ်။ ရှောင်ကျဉ်တတ်ကြပါတယ်။ ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုလိုချင်ရင် ”ရိုးသားမှုဆိုတာအကောင်းဆုံးမူ (Honesty is the best policy.)” ဆိုတာမျိုးကိုလက်ကိုင်ထားရပါမယ်။ ဒါမှလူတွေလက်ခံတဲ့အောင်မြင်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။
၆။ Passion (စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြခြင်း)
အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြမှဖြစ်ပါမယ်။ ဘဝဆိုတာက၉၀/၁၀နိယာမပါ။၉၀ရာခိုင်နှုန်းက ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြမှုနဲ့ တစ်နည်းအားဖြင့်တုန့်ပြန်မှုနဲ့ဆိုင်ပြီး၁၀ရာခိုင်နှုန်းကကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အရာနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကကိစ္စတစ်ခုကို လူတိုင်းကြုံတွေ့ရပါမယ်။ အဲဒီလိုကြုံတွေ့တာကအောင်မြင်မှုရဲ့ ၁၀ရာခိုင်နှုန်းပဲရှိပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စအပေါ်မှာတုန့်ပြန်တာက အောင်မြင်မှုနဲ့၉၀ရာခိုင်နှုန်းသက်ဆိုင်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်အောင်မြင်ဖို့အတွက် စိတ်ဓါတ်ပြင်းပြဖို့လိုပါတယ်။
၇။ Connection (အဆက်အသွယ်)
ကိုယ်ကတစ်ယောက်တည်းနေရတာမျိုး ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတတ်တာမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတာကကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်နေရာတကာမှာမာနထားပြီးတော့ သူများအကူအညီမယူချင်လို့မရပါဘူး။ တခြားသူတွေနဲ့သာအဆက်အသွယ်ရှိမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အလုပ်တွေနဲ့ပါတ်သက်ပြီးသူတို့ဆီက အကြံဥာဏ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အမြင်တွေကိုဖလှယ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုရင်တော့အောင်မြင်ဖို့ကြိုးစားရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါပြီ။
၈။ Optimism (အကောင်းမြင်ခြင်း)
အောင်မြင်ဖို့ဆိုရင်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရုံနဲ့လည်းမလုံလောက်သေးပါဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိနေဖို့ လည်းလိုအပ်ပါသေးတယ်။ တချို့ကအလုပ်သာကြိုးစားလုပ်နေတာ ”ငါဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ငါအောင်မြင်ပါ့မလား” ဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသံသယတွေဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ”ငါလုပ်နိုင်တယ်။ငါအောင်မြင်ရမယ်” ဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကိုမွေးမြူလိုက်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက် ခြေတစ်လှမ်းစလှမ်းပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။
၁၀။ Communication (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး)
ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကလည်း ကိုယ့်အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကို အာရုံစိုက်ပေးပါ။ ဂရုစိုက်ပေးပါ။ ကိုယ်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့ သူဆိုရင်ကိုယ့်အလုပ်အတွက် အပေါင်းအသင်းတွေဆီကအကူအညီရစေပါတယ်။ လူတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့ နည်းပရိယာယ်တွေကိုသိအောင်လေ့လာရပါမယ်။ ကိုယ်ကအောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်လူတွေနဲ့ ကင်းကင်းနေဖို့မဖြစ်နိုင်လို့ပါ။
အောငျမွငျဖို့အတှကျဘာတှလေိုအပျနတောလဲ။ ဒီမှာ အောငျမွငျစဖေို့ ထားရှိရမယျ့ အရာတှလောပါပွီ။ အောငျမွငျဖို့တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျမတူညီတဲ့လိုအပျခကျြတှကေို ခဏဖယျထားလိုကျပါ။ အောငျမွငျခငျြတဲ့လူတိုငျးမှာ သိရှိရမယျ့အခကျြ (၁၀) ကို ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
၁။ Drive (မိမိကိုယျကိုတှနျးအားပေးခွငျး)
တခွားသူတှထေကျပိုထူးခြှနျပွီးအောငျမွငျဖို့ဆိုရငျကိုယျ့ကိုယျကိုပိုခိုငျးပါ။တှနျးအားပေးပါ။ အလုပျတဈခုပွီးတိုငျးကိုယျ့ကိုယျကိုဂုဏျယူလိုကျပါ။ ကိုယျ့ရဲ့ရညျမှနျးခကျြပနျးတိုငျကိုခမြှတျပွီးပွီဆိုရငျ အကောငျအထညျဖျောနိုငျအောငျကွိုးစားဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုတှနျးအားပေးပွီးခိုငျးတတျပါစေ။
၂။ Self-reliance (မိမိကိုယျကိုအားကိုးခွငျး)
အလုပျတှကေိုကိုယျတိုငျတာဝနျယူပွီးလုပျကွညျ့ပါ။ ခကျခဲတဲ့ဆုံးဖွတျခကျြတှဆေိုရငျလညျးကိုယျတိုငျခကြွညျ့ပါ။ တဈခုပါပဲ။ ကိုယျ့အကွောငျးကိုကိုယျတိုငျသိဖို့ပါပဲ။ ဆိုလိုတာကသခြောတတျမွောကျဖို့ဆိုတာကိုယျတိုငျလုပျကိုငျဖို့နဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုအားကိုးသငျ့တယျဆိုတာကို လကျခံရပါမယျ။ ဒါမှအတှအေ့ကွုံမြားပါမယျ။
အတှအေ့ကွုံမြားမှအောငျမွငျဖို့ ကွိုးစားရငျးတှကွေုံ့ရတဲ့အခကျအခဲတှကေို ကြျောလှားနိုငျမယျမဟုတျပါလား။
၃။ Will-power (စိတျစှမျးအား)
ကိုယျဖွဈခငျြတဲ့အရာကိုဖွဈအောငျလုပျပါ။ရောကျခငျြတဲ့ပနျးတိုငျကိုအရောကျသှားပါ။ ကမ်ဘာ့အတျောဆုံးနဲ့အအောငျမွငျဆုံး ပုဂ်ဂိုလျတှကေသူတို့ရဲ့ ပနျးတိုငျတှကေိုရောကျဖို့ တစိုကျမတျမတျနဲ့ အားသှနျခှနျစိုကျကွိုးစားကွပါတယျ။ ”There is will, there is way” ဆိုသလိုပါပဲ။ ”လိုလြှငျကွံဆနညျးလမျးရပါတယျ။” အဓိကကကိုယျ့မှာ အောငျမွငျဖို့အတှကျစိတျစှမျးအားရှိနဖေို့ပါပဲ။
၄။ Patience (စိတျရှညျခွငျး)
၅။ Integrity (ကိုယျကငျြ့တရား)
ဒါကတော့ပွောစရာတောငျမလိုပါဘူး။ကိုယျကငျြ့တရားဒါမှမဟုတျစာရိတ်တမကောငျးတဲ့သူကိုလူ့အဖှဲ့အစညျးကပဈပယျတတျကွပါတယျ။ ရှောငျကဉျြတတျကွပါတယျ။ ရရှေညျအောငျမွငျမှုကိုလိုခငျြရငျ ”ရိုးသားမှုဆိုတာအကောငျးဆုံးမူ (Honesty is the best policy.)” ဆိုတာမြိုးကိုလကျကိုငျထားရပါမယျ။ ဒါမှလူတှလေကျခံတဲ့အောငျမွငျတဲ့သူတဈယောကျ ဖွဈလာမှာပါ။
၆။ Passion (စိတျဓါတျပွငျးပွခွငျး)
အောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျတော့စိတျဓါတျပွငျးပွမှဖွဈပါမယျ။ ဘဝဆိုတာက၉၀/၁၀နိယာမပါ။၉၀ရာခိုငျနှုနျးက ကိုယျ့ရဲ့စိတျဓါတျပွငျးပွမှုနဲ့ တဈနညျးအားဖွငျ့တုနျ့ပွနျမှုနဲ့ဆိုငျပွီး၁၀ရာခိုငျနှုနျးကကိုယျတှကွေုံ့ရတဲ့အရာနဲ့ဆိုငျပါတယျ။ ဆိုလိုတာကကိစ်စတဈခုကို လူတိုငျးကွုံတှရေ့ပါမယျ။ အဲဒီလိုကွုံတှတေ့ာကအောငျမွငျမှုရဲ့ ၁၀ရာခိုငျနှုနျးပဲရှိပါတယျ။ အဲဒီကိစ်စအပျေါမှာတုနျ့ပွနျတာက အောငျမွငျမှုနဲ့၉၀ရာခိုငျနှုနျးသကျဆိုငျနပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့အောငျမွငျဖို့အတှကျ စိတျဓါတျပွငျးပွဖို့လိုပါတယျ။
၇။ Connection (အဆကျအသှယျ)
ကိုယျကတဈယောကျတညျးနရေတာမြိုး ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတတျတာမြိုးဖွဈနတေတျပါတယျ။ ကိုယျ့အားကိုယျကိုးတာကကောငျးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့နရောတကာမှာမာနထားပွီးတော့ သူမြားအကူအညီမယူခငျြလို့မရပါဘူး။ တခွားသူတှနေဲ့သာအဆကျအသှယျရှိမယျဆိုရငျ ကိုယျ့အလုပျတှနေဲ့ပါတျသကျပွီးသူတို့ဆီက အကွံဉာဏျယူနိုငျပါတယျ။ အမွငျတှကေိုဖလှယျနိုငျပါတယျ။ ဒီလိုဆိုရငျတော့အောငျမွငျဖို့ကွိုးစားရာမှာ အထောကျအကူဖွဈစပေါပွီ။
၈။ Optimism (အကောငျးမွငျခွငျး)
အောငျမွငျဖို့ဆိုရငျကွိုးစားရုနျးကနျနရေုံနဲ့လညျးမလုံလောကျသေးပါဘူး။ ကိုယျ့ကိုယျကိုယုံကွညျမှုရှိနဖေို့ လညျးလိုအပျပါသေးတယျ။ တခြို့ကအလုပျသာကွိုးစားလုပျနတော ”ငါဖွဈနိုငျပါ့မလား။ငါအောငျမွငျပါ့မလား” ဆိုပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုသံသယတှဖွေဈနတေတျပါတယျ။ ”ငါလုပျနိုငျတယျ။ငါအောငျမွငျရမယျ” ဆိုတဲ့ယုံကွညျမှုမြိုးကိုမှေးမွူလိုကျပါ။ ဒီလိုဆိုရငျအောငျမွငျဖို့အတှကျ ခွတေဈလှမျးစလှမျးပွီးသားဖွဈနပေါပွီ။
၁၀။ Communication (ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး)
ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကလညျး ကိုယျ့အောငျမွငျမှုအတှကျအရေးကွီးပါတယျ။ မိတျဆှအေပေါငျးအသငျးတှကေို အာရုံစိုကျပေးပါ။ ဂရုစိုကျပေးပါ။ ကိုယျကပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးကောငျးတဲ့ သူဆိုရငျကိုယျ့အလုပျအတှကျ အပေါငျးအသငျးတှဆေီကအကူအညီရစပေါတယျ။ လူတှနေဲ့ပေါငျးသငျးဆကျဆံတဲ့ နညျးပရိယာယျတှကေိုသိအောငျလလေ့ာရပါမယျ။ ကိုယျကအောငျမွငျခငျြတယျဆိုရငျလူတှနေဲ့ ကငျးကငျးနဖေို့မဖွဈနိုငျလို့ပါ။
အာလူးပုစွန် ပူပူလုံး ပြုလုပ်နည်း